ကူမင်း ရန်ကုန်သို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ MAI အရေးပေါ်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် - Logistics Guide
ကူမင်းမှ ရန်ကုန်သို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ MAI အရေးပေါ်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။
ကြေညာချက် အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
MAI အနေဖြင့် ကူမင်းမှ ရန်ကုန်သို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ငြင်းဆန်ထားကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့အစည်းအချို့မှ ဖော်ပြထားချက်ကို မိမိတို့ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါဖော်ပြချက်များသည် လက်ရှိကပ်ရောဂါဘေးအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းစံနှုန်းနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး မှားယွင်းမှုနှင့် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
MAI အနေဖြင့် မိမိတို့ပျံသန်းပြေးဆွဲနေသည့်ခရီးစဉ်များအတွင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကို ငြင်းဆန်ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် လိုအပ်နေသည့်မိမိတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တတ်စွမ်းသမျှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ဝန်ထမ်းများပါ ထိခိုက်ခံနေရသည့် နိုင်ငံအတွင်းမှ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများ မြင့်တက်နေမှုကြောင့် စိန်ခေါ်မှုများအပြင်းအထန်ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် ပျံသန်းမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အထူးအလေးပေး ဖော်ပြလိုပါသည်။
အထက်ပါကဲ့သို့သော မှားယွင်းသည့်သတင်းများကိုဖြန့်ဖြူးနေသည့် လိမ်လည်ဟန်ဆောင်သတင်းထုတ်ပြန်သူများအပေါ် ဥပဒေအရအရေးယူမှုအပါအဝင် လိုအပ်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များပြုလုပ်ရန် တုံ့ဆိုင်းနေမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
MAI အနေဖြင့် ပြည်သူ့အတွက် နိုင်ငံ့အတွက် အစဉ်ရပ်တည်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
It has come to our attention that certain parties claiming to be from MAI have issuedaletter to deny the carriage of essential items from Kunming (KMG) to Yangon (RGN). We find such claims misleading and false, which goes against the industry norms, considering the current pandemic situation.
MAI has not denied the carriage of essential items across our network and we will continue to do as long as our efforts are required. We would also like to highlight that we have been operating continuously despite the extremely challenging environment due to the spike of COVID-19 cases in the country, impacting our staff members severely.
We will not hesitate to take necessary steps, including legal actions against the false perpetrators who have disseminated such incorrect information.
??? - ?? ??? ??? ??? ??????, ??? ??? ???????